2009 Moto Guzzi Griso 1200 8V Ukuphononongwa - Ukuhlaziywa kwe-Moto Guzzi Griso Motorcycle ka-2009
Ininzi yezithuthuthu ziyaxokozela kwaye zinamandla, kodwa zimbalwa zifezekisa ukulungelelanisa "umlingiswa." I-Moto Guzzi ngumenzi wase-Italy oye wajikeleza iminyaka engama-90, kwaye sele sele ebizwa ngokuba nokwakha amabhayisikili kunye neetoni ezibizwa ngoko "Impawu" - nokuba oko kukuhle okanye kakubi into kuxhomekeke kwinqabileyo yakho, kodwa sichitha ixesha kunye ne-2009 Griso model (ukuqala kwi-14,290 yeeRandi) kwaye ngokuqinisekileyo sithandwa ngumntu ongeyonto.
Nangona isakhelo saso se-steel siimitha siboleka isilwanyana esingavamile, i-2009 ye-Griso ephawulekayo yintlahlela ye-8-valve, i-twin ye-twin engama-90. Isixhobo sokutshala amandla esithintelayo sinezixhobo ezintsha ezingama-563, kuquka iindlebe ezintsha kunye neepiston ezikunceda ukufezekisa umlinganiselo wokunciphisa u-11.1: 1. Ukuxhobisa amahhashi kuye kwaphakanyiswa kwi-110 (kwi-7,500 rpm), kunye ne-torque i-79.7 ft-lbs kwi-6,400 rpm-ekhangayo kakhulu ngenjini injini.
Ingcambu iyaxutywa kwisantya sesantya esineesithandathu, kwaye i-swingarm esecaleni enye inezindlu zokufaka i-shaft drive. I-piston ye-Brembo ibheki kunye nee-43mm ezifakwe kwiifolokhwe zeSwawa zifunyenwe ngaphambili, ngelixa iiplani ezimbini ze-piston zikhona ngasemva, kunye ne-monoshock exhotyiswe ngogesi.
I-Guzzi yokuqala eyayihamba ngayo yayiyi-Griso ka-2007, kwaye andizange ndiyifumane-ngoko xa ndinikezwa ixesha kunye ne-2009 Griso, andingalindelanga.
Kodwa ukukhwela ibhayisiki elitsha kwavakalelwa ngokukhawuleza. Kwakungeyona nje ipayipi yayo emva kwe-Termignoni, ephakamileyo kodwa ngokugqithiseleyo ipholile ngaphaya kwesitokethi esifumanekileyo kwi-'07 imodeli. Ngandlela-thile, ibhayisikili yahlala iphila ngakumbi nangaphandle; Inqaku layo lokuqhaqhaqhaqhayisa elinokukhawuleza liye laphazamisa abamelwane, kodwa ngokuqinisekileyo lenze lo mqhubi wezinto ezithandwayo ...
nangona ndizama ukugxotha iGriso kude negaraji lam kwiihlandlo ezimbalwa ngaphambi kokuba ndiqale le nkwenkwe embi.
Isikhwama sikhulu kwaye siyaneliseka, kwaye siziva ngokwaneleyo ngokukhwela ixesha elide. Ubuncinane bemi, i-Griso ibonakala ide kakhulu (kwaye ikhona, nge-wheelbase ye-inch 61.2 intshi.) Ukulawulwa kufumaneka lula, kwaye umboniso wendibaniselwano udibanisa ngempumelelo i-analog tachometer enejubane ye-digital kunye neminye imisebenzi efana neqondo lokushisa. Iinkcukacha ezifanelekileyo zibandakanya iipalati ezingenanto kunye ne-aluminium ejikeleza i-fuel filler ... kwaye ulungele ukufumana iinkcukacha ezifanelekileyo kule bhayisiki, ekubeni i-pricetag ye-premium.
Into eyinqaba kakhulu nge-Moto Guzzi kukuba i-bike yonke iyayilungisela ekunene xa uyibuyisela injini engathathi hlangothi. Ibizwa ngokuthi "i-torque reaction reaction" kwaye iyenzeka ngenxa yokuqhelaniswa kwezi zixhobo ezinkulu, eziphambili.
Emva kokuba uhamba ngaphaya kwesi simangaliso, kuninzi ukuzonwabisa kunye ne-2009 Moto Guzzi Griso. Unamandla amakhulu kakhulu kunomntu ongaphantsi kwe-8-valved predecessor, kwaye nangona kukho ukudibanisa phakathi kwebhanki ephakathi, u-5 500 rpm ukuya kwi-8,000 rpm evulekileyo ngokugqithiseleyo. Ngokungafani nomshini wokuthunga-onjenge-inline ye-4-cyilinder injini, le nto iyancwina njengengqondo kwaye ihlala ibonakala ixubusha ngokuthe ngqo into eyenziwa ngaphakathi kwe-crankcase yayo-enokuthi ibe yi-nirvana okanye isangqa sesihogo, kuxhomekeke kwisimo sakho.
Ibhokisi lebhokisi lisebenza ngokufanelekileyo kwaye liqikelele, kunye nekhonkco elibuthakathaka kuphela li-clutch elithwala kakhulu, eliqala ukuziva lukhulu kakhulu kwizithuthi. Kodwa kwindlela evulekile, iGriso yinto emnandi yokukhwela. Ukukhwela kwalo kuqhutywe kodwa kulawulwa, kunye nezibonakaliso ezizinzileyo-nokuba ubude bayo bunokuba buncinane bezandla ezisezantsi. Iibhenki zeBrembo zisebenza kakuhle, zongeza ukuzithemba kwi-equation. Nangona ubunzima balo obunzima bee-489 iipounds ziwuthintela ukuba ludideke ngezemidlalo yonke, iGriso ayinamandla kwaye ikwazi ukuhlaziywa ngokwaneleyo ukubonelela ngokuzonwabisa okuninzi kwiindlela ezikude, eziphikisayo.
I-Moto Guzzi Griso yibhayisiki ephosa; uya kuthanda iimpawu zayo ezingavamile, okanye uqhutywe ngabo. Kum? Ndandidla ixesha elide ndigibela i-Griso ngeLos Angeles, kwaye ndonwabile kakhulu kunomzekelo ka-2007 owawuvavanya ngexesha elithile.
Nangona kukude kukugqibeleleyo, yiyo leyo micimbi yobuntu-injini ephazamisayo, inyawo enkulu, kunye ne "torque reaction" -kukwenza uzive ngathi ugibele isithuthuthu esinzulu. Kungenzeka ukuba kungabikho kubo bonke abantu, kodwa ndandithanda ukukhwela i-Moto Guzzi Griso kakhulu kunokuba ndikulindele. Yaye ukuba awuyi kuhlawula i-premium ye-14,290 yee-premium, ndicinga ukuba unakho.
5 Iingqungquthela ezikhunjulwayo zokuthi "Yintoni endiyenayo ngemoto?"
Ngaba i-Zappers ze Bug Bug ubulala amaMosquito?
IJografi yeTropic yeCapricorn
Iphulo loPhando: Itikiti kwiSikolo esiPhezulu